Shaqaalaha Mobilada | Martech Zone
Talaado, Agoosto 2, 2011 Talaado, September 4, 2012 Douglas Karr
Marka la gaaro 2012, Morgan Stanley wuxuu saadaaliyay in shixnadaha casriga ah ay ka badnaan doonaan shixnadaha kumbuyuutarka. Intaa waxaa dheer, waxaa la filayaa in 25% dhammaan e-commerce-ka internetka lagu fulin doono aaladda moobaylka. Waxaa horey loo qiyaasey in 30% e-maylka shirkadaha lagu akhriyo aaladda moobaylka. In kasta oo baraha bulshada ay umuuqdaan kuwa hogaaminaya sheekooyinka badankood… mobaylka waa in maskaxda ku haysa shirkad kasta.
Laakiin shirkadaha waa inaysan si fudud uga eegin moobiilka dhanka suuq geynta, ganacsiyada sidoo kale waa inay ku dhiiri geliyaan shaqaalahooda inay korsadaan. Tani infographic ka yimid Dell wuxuu ka hadlayaa wax ku oolnimada mobilada marka laga eego xagga shaqada iyo wax soo saarka. Sida infographic sheegayo:
Ma la joogaa waqtigii dib looga fakari lahaa siyaasadahaaga IT-ga oo aad ugu biiri lahayd dhaqdhaqaaqa shaqaalaha moobilka? Shirkadaha si dhakhso leh ula qabsan kara muuqaalka cusub ee moobiilka waxay u badan tahay inay barwaaqoobaan oo ay barwaaqoobaan.
Shaqaalaha aqoonta ku saleysan waxay wadaan ganacsiga iyagoo kuxiranaya xiriir. Shaqaalahaagu xiriir ma leeyihiin?
Tags: infographicSuuqgeynta Mobilada iyo Mashiinkataleefanka gacantashaqaalaha mobilada
Abuur Mawduucyada Mobilada leh WPtouch Pro
Baraha Bulshada iyo Guusha: Goynta vs dheeraynta